Abuur barnaamijkeena moobiilka - Geofumadas
Janaayo, 2012 tabo cusub, Internet iyo Blogs, egeomates My
Kalluumeysiga ayaa suurtogal ah inuu yahay mid ka mid ah xalka ugu fiican ee halkaas ka jira si loo dhiso codsiyada moobiilka. Dabacsanaanta ay haysato, oo lagu daray tirada barnaamijyada la taageerayo waxay ka tarjumaysaa shaqo aan caadi aheyn oo abuurayaasheeda ay ku leeyihiin taas oo aaladda loo yaqaan 'blog' ama 'Store' Android Store loo geyn karo codsiyada 'rss feed' ama waxyaabaha ku saabsan warbaahinta bulshada. .
Tani, qofkasta oo aan ka ahayn barnaamij khibrad wacyigalineed wuxuu horumarin karaa qalab shaqeynaya, badanaa laga soo qaato internetka; inkastoo ay sidoo kale u ogolaato in lagu daro horumarinta khaaska ah sababtoo ah waxay leedahay API in hubaal ahaan ka sahlanaan karo marka la soo rogo shaatiga leh lambarka xoqan.
Waxaa macquul ah in xogta laga helo ilo kala duwan, iyada oo la adeegsan karo nuqulo sahlan sida rss, YouTube, Khariidadaha, muusikada ama sawirrada.
Waxaa intaa sii dheer, waxay taageertaa sheekada html iyo xidhiidhada tooska ah ee jaangooyooyinka caadiga ah sida xiriirka iyo emailka.
Isku-dubbarid maqaallada caanka ah
Tani, blog waxaa loo qaadan karaa codsi mobile ah oo ay ka mid yihiin cinwaanka rss; mana aha oo kaliya laakiin sidoo kale madadaalo kale.
Tusaale ahaan, waxaan ku siinayaa tusaalaha aan ka sameeyay Geofumadas, kan, anigoo arkaya sida ay uga muuqato Ipad: Fiiri in muuqaalka dabagalka quudinta uu yahay mid aad u macquul ah.
Badhamada marinku waa loo beddeli karaa siday u kala horreeyaan, in kasta oo barxadda ay ka maqan yihiin waxyaabo aan u malaynayo inay hadhow isdhexgalidoonaan, sida badhanka soo noqoshada maxaa yeelay markaad gujineysid aragtida asalka ah ee qaabka biraawsarka, kuma jiraan astaan ​​inaad dib ugu noqotid codsiga mobilada ; Tani waxay dhacdaa markii loo keydiyay sida toobiye kumbuyuutarka ipad-ka, kaas oo bilaaba Safari iyada oo aan wax menu ah la dhigin. Sidoo kale soo dejinta nooca Android ayaa mararka qaar sugta, in kastoo mar la rakibo aysan wax dhibaato ah jirin.
Isku-dubarid waxyaabaha ku jira shabakadaha bulshada
Isla codsigan badhan ayaa lagu dari karaa si looga tarjumayo dhaqdhaqaaqa bogga Facebook, koontada Twitter ama erey aan raacno. Tusaalaha soo socdaa wuxuu ka yimid koontada Geofumadas, adigoo u arkaya sidii codsi Android ah.
Sidan oo kale, markaa raaca daacadda ah wuxuu ku lahaan karaa hal guji cusbooneysiinta bogga, iyo sidoo kale isdhexgalka shabakadaha bulshada. Waxqabad kasta wuxuu leeyahay guji la heli karo oo lala wadaago waxyaabaha ku jira. Yaan dhahno haddii fiidiyowyada Youtube ee la xiriira mowduuca la isku daray.
Markaad ku qeexdid ilaha xogta, waxaad dooran kartaa guryaha dejinta, sida calaamadda codsiga, qaabka asalka ah, luqadda iyo kiniinka midabka.
Marka laga hadlayo hagista, waxaad dooran kartaa halka uu bar-baartu maro, hoose, kor, baloogyada taagan ama badhamada dusha laga saaray. Kondhiitku wuxuu leeyahay adeeg horudhac ah oo aad ufiican oo toosan iyo toosan labadaba, markaa waad ogtahay sida ay u eegi doonto barmaamijyada kaladuwan ee la taageero:
BADA / Samsung
Waxaa sidoo kale laga arki karaa heerka webka.
CSida loo faafiyo codsiga
Marka la abuuro, Conduit waxay leedahay dhowr siyaabood oo lagu faafin karo codsiga, taas oo ah ujeedada ugu dambaysa ee kuwa abuura:
Hal dariiqo ayaa ah inaad u weeciso martidaada. Waxaa jira shaqeeyn, taas oo loo sameeyay qoraal lagu koobiyeeyo koodhka goobta, mar kasta oo booqde uu ka yimaado mobilka, digniin ayaa la soo saarayaa si looga digayo inuu jiro nooc mobilada ah oo la siinayo ikhtiyaarka uu ku doorto sida loo arko.
Mid kale ayaa kor u qaadaya shabakadaha bulshada (Twitter ama Facebook), waayo waxaa jira badhano gaar ah oo ku yaal hoose ee guddiga arjiga.
Waxay sidoo kale keenaysaa shaqeynta abuuritaanka QR code, kaas oo la gelin karo goobta si loogu qabsado kamarad mobile.
Ugu dambeyntiina waxaa jira ikhtiyaari ah in lagu soo dhejiyo dukaamada arjiga. Conduit wuxuu nidaamkan sifiican u horumarey, si loo soo geliyo xogta arjiga, sawirada sida looga baahan yahay dukaamada, xulashada wadamada laga arki karo, ka dibna ikhtiyaarka ah in la soo saaro arjiga soo dejinta. Dabcan, tani waxay ubaahantahay lacag bixinta dukaamada, marka laga hadlayo Android waxaad bixisaa US $ 25 diiwaangelinta, Windows Mobile US $ 99 iyo Apple waxaad bixisaa US $ 100 sanadkii; Dabcan, sidoo kale waad dejin kartaa qiimo soo dejinta, tan laguma sameeyo Conduit laakiin waa dukaanka.
Marka la soo dhajiyo, cusbooneysiinta waxaa laga sameeyaa kumbuyuutarka oo leh hal bistoole, iyada oo aan mar labaad lagu soo celin.
Waxay leedahay shaqeyn xiiso leh si ay ugu dirto ogeysiis deg deg ah isticmaaleyaasha soo dejiyey. Tan waxaa loo diri karaa guud ahaan qof walba, wadan ama xitaa adoo dooranaya aag juqraafi ah khariidada.
Xaqiiqdii. mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee aan arkay ee abuuraya barnaamijyada moobiilka iyadoo aan khibrad u lahayn barnaamij-yaqaan. Ha u noqoto adeeg bilaash ah, maxaa ka fiican.
Way mudan tahay in la isku dayo, maxaa yeelay waxay ka badan tahay waxa aan ku muujiyey maqaalkan, tusaale ahaan tirakoob aad u xiiso badan iyo nidaam xayeysiin ah. Muunad ahaan waxaan kaaga tegayaa wixii aan uga soo shaqeeyey Geofumadas nooca mobilada anigoo isticmaalaya Conduit:
Capture Geofumadas QR code
Download Geofumadas ee Android
Horudhac galka sawir-gacmeedka
tag galka Conduit
Post Previous" Hore Laga soo bilaabo xidhitaanka Megaupload iyo qaar ka mid ah sawirada
Post Next Maareynta aqoonta, adduunku wuu is beddelayNext »
Juun, 2013 at
U beddel sawirkaaga
Fernando isagu wuxuu leeyahay:
Hal su'aal, sidee ayaad uga saartey shaashadda furitaanka? Ma aqbali karo